ဘယ်လိုကျန်းမာဖြစ် | ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်သတင်းအချက်အလက် | USAHello
သငျသညျကျန်းမာနေဖို့လိုလုပျနိုငျအရာများစွာကိုရှိပါတယ်. ကျန်းမာသန်စွမ်းဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်ဖတ်အကြံပေးချက်များ. ရောဂါများနှင့်ရောဂါကူးစက်မှု၏ပြန့်ပွားတားဆီးဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ. အဆိုပါအိပ်ပျော်နေတဲ့၏အရေးပါမှုနှင့်မည်သို့ဆေးလိပ်ရပ်တန့်ဖို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးဖတ်.
လက်အဝတ်လျှော်သင်နှင့်သင့်မိသားစုကျန်းမာစောင့်ရှောက်လုပျနိုငျအရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်. ထိုအကြောင်းကြောင့်နာမကျန်းလက်အဆက်အသွယ်များကပြန့်နှံ့လျက်ရှိသောကြောင့်, လူအများရောဂါပိုးဖြစ်ပါတယ်.
သငျသညျဖမ်းဆုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ချောင်းဆိုးပြီးနောက်သင်သည်သင်၏လက်ကိုဆေးသေချာအောင်လုပ်ပါ, အစားအသောက်ပြင်ဆင်နေမတိုင်မီ, သငျသညျအိမ်သာကိုအသုံးပြုဖို့အပြီး, သင်တစ်ဦးသည်အနာရောဂါစွဲလူတစ်ဦးကိုထိပြီးနောက်, သငျသညျအမှိုက်သို့မဟုတ် fecal ကိစ္စကိုင်တွယ်ပြီးနောက်, သငျတို့သတိရစ္ဆာန်တို့ထိပြီးနောက်.
သင်၏နှုတ်, အံစောင့်ရှောက်မှုယူပြီးကျန်းမာရေးပြဿနာများရှောင်ရှားဘို့အရေးကြီးပါတယ်. ဆရာဝန်များသင်သည်သင်၏သွားတိုက်တဲ့နေ့ကတကြိမ်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်နှင့်ကြားရှင်းကြိုးအကြံပြု. သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့အံသွားသန့်စင်ခြင်းနှင့် check လုပ်ထားကြတိုင်းခြောက်လသင့်ရဲ့သွားဆရာဝန်၏ရုံးခန်းမှာသွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်. သငျသညျကိုဘယ်လိုအကြောင်းဖတ်နိုင် သင့်ရဲ့ပါးစပ်နှင့်သွားများဂရုစိုက်.
အခြို့သောရောဂါ, အအေးမိသို့မဟုတ်တုပ်ကွေးနဲ့တူ, ပြည်သူများအကြားအလွယ်တကူပျံ့နှံ့.
ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အစင်တာများ (CDC) ကျန်းမာနေဖို့ဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ကိုပေးသောအစိုးရအေဂျင်စီဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ CDC အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ် ရောဂါပြန့်ပွားတားဆီးဖို့ဘယ်လို အိမ်မှာ, အလုပ်, ကြောငျး, နှင့်အများပြည်သူအတွက်.
ဦးခေါင်းခွငျကောငျလူ့ခေါင်းပေါ်မှာကြောင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအလွန်သေးငယ်သော bug တွေရှိပါတယ်. သူတို့ကသင့်ရဲ့ဦးခေါင်းထိပ်ကနေအသွေးတော်အပေါ်အစာကျွေးခြင်းဖြင့်ရှင်သန်, တစ်ဦးအပြင်းအထန်ယားယံခြင်းနှင့်စိတ်ဆိုးခံစားမှုဖြစ်စေတဲ့. ခွငျကောငျပုဂ်ဂိုလျတစျဦးမှလူတစ်ဦးကနေအလွန်လွယ်ကူစွာပျံ့နှံ့နှင့်ကလေးများအကြားတစ်ဦးအလွန်ဘုံပြဿနာဖြစ်ကြသည်နိုင်ပါတယ်. (သားသမီးများ၏အုပ်စုများရှိပါတယ်ဘယ်မှာခွငျကောငျမကြာခဏပြန့်နှံ့, တစ်ကျောင်းတွင်ဥပမာ။)
သင်သို့မဟုတ်သင့်ကလေးခွငျကောငျရှိပါက, ကဆင်းရဲသားကိုသန့်ရှင်းမှု၏လက္ခဏာသက်သေမဟုတ်ပါဘူး. သို့သော်, သငျသညျသေချာပြဿနာကိုပယ်ရှားတတ်ပါစေနိုင်ရန်အတွက်အခြို့သောခြေလှမ်းများယူရပါလိမ့်မယ်. ဦးခေါင်းခွငျကောငျအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ.
ခွငျကောငျဆင်တူ, ကြမ်းပိုးသညျလူသားတို့ကိုကိုက်ကြောင်းသေးငယ်တဲ့ bug တွေရှိပါတယ်, ကိုက်န်းကျင်အရေပြားပေါ်တွင်ယားယံခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောယားယံစေ. ခွငျကောငျမတူဘဲ, ကြမ်းပိုးပရိဘောဂများနှင့်အဝတ်အစားအတွက်အဓိကအားဖြင့်အသက်ရှင်နေထိုင်.
ကြမ်းပိုးကလူတို့အကြားအလွန်လွယ်ကူစွာပျံ့နှံ့နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုတားဆီးဖို့ဘယ်လိုသတိထားဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်. သငျသညျ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုအကြောင်းကိုဘာသာစကားမြားစှာသငျယူနိုငျပါတယျ ကြမ်းပိုးနှင့်မည်သို့ပြဿနာကိုထိန်းချုပ်ဖို့. သတင်းအချက်အလက်များဘာသာစကားမြားစှာ၌တည်ရှိ၏.
အကောင်းတစ်ဦးညဥ့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းရယူခြင်းသင့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးသည်. အများစုမှာအရွယ်ရောက်လိုအပ်7သို့ 8 အိပ်စက်ခြင်း၏နာရီညဥ့်.
အိပ်ရာမသွားမီသင့်ဖုန်းနှင့်ကွန်ပျူတာတစ်နာရီသို့မဟုတ်နှစ်ခုနဲ့တူအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေကို turn off.
အဆိုပါ Read အိပ်စက်ခြင်းဆေးပညာရဲ့အကြံပေးချက်ကိုအမေရိကန်အကယ်ဒမီ ကျန်းမာအိပ်တွေအကြောင်း.
ကလေးတွေအကောင်းတစ်ဦးညဥ့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းရဖို့အတှကျဒါဟာအထူးသဖြင့်အရေးကြီးပါသည်. ကလေးများအရွယ်ရောက်ထက်ပိုအိပ်ပျော်ခြင်းလိုအပ်ပါတယ်. သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထူးအရေးကြီးသောကြောင့်. သင်နှင့်သင့်ကလေးများအနေဖြင့်အိပ်စက်ခြင်းအကြံပေးချက်များဖတ်ရှုနိုင်သည် အမျိုးသားအိပ်စက်ခြင်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ. သင်သည်သင်၏ကလေးတွေကိုအလုံအလောက်အိပ်ပျော်ခြင်းရသေချာအောင်လိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျကြောငျးတှငျပိုကောင်းလုပ်ဖို့သူတို့ကိုပြင်ဆင်နေကြသည်. သင်သည်ထိုသူတို့ဘဝကိုရှည်ကျန်းမာအလေ့အထများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကူညီခြင်းဖြစ်ကြောင်းတချိန်တည်းမှာ.
သင်ကအလုံအလောက်အိပ်ပျော်ခြင်းရဖို့စေသည်ခြားနားချက်နှင့် ပတ်သက်. အံ့အားသင့်လိမ့်မည်! အိပ်ပျော်နေတဲ့၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းကိုသင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာစကားလုံးပျံ့နှံ့ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်.
ပြည်သူ့ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဆေးလိပ်စတင်ရန်. နိုင်ငံအများအပြားဆေးလိပ်ထို့ကြောင့်ဆေးလိပ်၏အန္တရာယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်တစ်ဘုံအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်မပေးပါဘူး. သင့်ရဲ့အကြောင်းပြချက်မီးခိုးမှစတင်ခဲ့ဘာပဲ, ဖြတ်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုပါလိမ့်မည်. ကင်ဆာနှင့်အခြားပြင်းထန်သောရောဂါမှ Smoking ဆောင်.
ပျက်ဆီးခန္ဓာကိုယ်နီးပါးတိုင်းကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို Smoking. ဒါဟာကာကွယ်နိုင်သောသေမင်း၏ဦးဆောင်အကြောင်းအရင်း. ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကအောက်ပါအခြေအနေများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်သင့်အန္တရာယ်များကိုတိုးပွါး:
ဆေးလိပ်ဖြတ်လူတိုင်းအတွက်ခက်ဖြစ်ပါသည်. ကြာကြာသင်သောက်သည်ပါပြီ, အဆိုပါခက်ခဲသည်! ဆေးလိပ်သောက်စွဲလမ်းသောကွောငျ့ဤသူကားအ. သင်တစ်ဦးတည်းလုပ်ရန်မလိုပါ. အကူအညီရမှဖြတ်၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားနှင့် ပတ်သက်. သင်၏ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ, ထိုကဲ့သို့သောဆေးလုံးသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်ပိုမိုလွယ်ကူအောင်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦး patch ကိုအဖြစ်. အကြောင်းကိုလေ့လာပါ ဆေးလိပ်နှင့်မည်သို့ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ အဆိုပါ CDC ကနေ.
မှတ်စု: သငျသညျ Medicaid ကိုစာရင်းသွင်းနေတယ်ဆိုရင်ပြီးနောက်သင်ဆေးလိပ်ကိုရပ်တန့်ကူညီပေးသည်တစုံတခုကိုမျှသင်၏အအာမခံအစီအစဉ်ကိုအောက်မှာဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်. အတော်များများကပုဂ္ဂလိကအစီအစဉ်များလည်း, ဤအကူအညီအထောက်အပံ့များကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်.